झुम्का जेसिजको सप्ताह कार्यक्रममा भदौ ८ गते जितिया तथा तिज बिशेष कार्यक्रम -
झुम्का जेसिजको सप्ताह कार्यक्रममा भदौ ८ गते जितिया तथा तिज बिशेष कार्यक्रम
प्रकाशित मिति: बिहिबार, भाद्र ०१, २०७४ समय: ११:४६:३९
रामधुनी,साउन १ । झुम्का जेसिजले प्रत्येक बर्ष आफ्नो महत्वपूर्ण कार्यक्रमको रुपमा मनाउदै आएको जेसीज सप्ताह यस बर्ष पनि बिभिन्न कार्यक्रम गरी मनाउने भएको छ । झुम्का जेसिजले यहि भदौ २ गते देखि ९ गते सम्म जेसिज सप्ताह सुरु गर्ने भएको छ । जनचेतना तथा नागरीकहरुलाई प्रत्यक्ष सेवा पुग्ने कार्यक्रमगरी सप्ताह ब्यापि कार्यक्रम मनाउने संस्थाका अध्यक्ष प्रकाश बन्धु बस्नेतले जानकारी दिनु भयो ।
जेसिज सप्ताह २०१७ का कार्यक्रमहरुमा भदौ २ गते सुक्रवार उद्धघाटन तथा निःशुलक स्वस्थ्य सिविर हुने जनाएको छ । रामधुनी वडा नं. ६ बक्लौरी स्वथ्य चौकीमा हुने सो कार्यक्रम जेसी जमुना नेपालको संयोजकमा बिहान ८ः०० बजेबाट सुरु हुने छ । त्यसैगरी जेसी ईश्वर कोईरालाको संयोजकमा भदौ ४ गते तिज तथा जितिया पर्वको अवसरपारी रेडक्रस सोसाईटि झुम्का शाखाको सभाहलमा बिहान ५ः०० बजे दर खाने कार्यक्रम रहने जनाएको छ ।
कार्यक्रम अन्तर्गत जेसी उपेन्द्र साहको संयोजकमा भदौ ५ गते डुम्राहाको अर्ता गाउँको ठुलो मोहर टोलमा बेलुका ४ः०० बजे झुल बितरण, जेसी कमल कार्कीको संयोजकमा भदौ ६ गते रामधुनी वडा नं. ४ रामजानकी प्राबि ईक्राहीमा शैक्षि सामाग्री बितरण दिनको १२ः०० बजे हुने छ । जितिया तथा तिज बिशेष कार्यक्रम भादौ ८ गते झुम्का जेसिजको सचिवालय प्राङ्गन झुम्का बजारमा बिहान १० बजेबाट रञ्जु सिग्देलको संयोजकमा कार्यक्रम हुने जनाएको छ । र भदौ ९ गते झुम्काको पुर्व बस स्टेण्ड अगाडी दिउसो २ः०० बजेबाट जेष्ठ नागरीकहरुलाई म्युजिकल चेयर कार्यक्रम गरे संगै सप्ताह कार्यक्रम समापन हुने जनाएको छ । कार्यक्रमहरुमा सहभागीकालागी जेसिज अध्यक्ष बस्नेतले सम्पुर्णमा नगरवासीमा अनुरोध गरेको छ ।